काठमाडौंमा खुल्यो रिस र तनाव पोख्ने थलो 'तोडफोड' (भिडिओ) :: सुसन चौधरी :: Setopati
तपाईंलाई भरमार रिस उठेको छ? के गरौं कसो गरौं भइरहेको छ? तनावले घेरिएर गुम्सिनुभएको छ?
यो रिस वा तनाव पोखे शान्त हुन्थेँ भन्ने पनि लागेको होला। अरू, आफैं र केही पनि हानी हुने गरी पोख्न त भएन। उसो भए कहाँ, कसरी पोख्ने?
यही दुबिधामा हुनुहुन्छ भने तपाईं काठमाडौं, त्रिपुरेश्वर जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा कोठा छ जहाँ तपाईंले आफ्नो रिस वा तनाव पोख्ने एउटा माध्यम पाउन सक्नुहुन्छ।
हामी कुरा गर्दै छौं ​​'तोडफोड- द रेज रूम' को।
तोडफोडको यो कोठा यस्तो ठाउँ हो जहाँ निर्धक्कसाथ सामान फ्याँक्न, रड र हतौडाले हान्न, फुटाउन पाइन्छ। मजाले हिर्काएर आफ्नो रिस शान्त पार्न सकिन्छ। तनाव कम गर्न सकिन्छ। वा मनोरञ्जनका लागि मात्र भए पनि जान सकिन्छ।
​​'हामी पुराना बोतल, टेलिभिजन र टायर दिन्छौं। तपाईं आएर, तोकिएको पैसा तिरेर, नियन्त्रित कोठामा सुरक्षित भएर सबै आवेग पोख्न सक्नुहुन्छ,' तोडफोडका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विभूषण अधिकारी भन्छन्।
तोडफोडका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विभूषण अधिकारी। तस्बिरः सुसन चौधरी/सेतोपाटी
डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी 'सोच' को अर्को कामका रूपमा तोडफोड सुरू भएको हो। सधैं नयाँ काम गर्न रूचाउने विभूषणले रिस पोख्ने थलोका बारेमा कहीँ सुनेका थिए। यस्तो गतिविधिले रिस र केही हदसम्म तनाव पनि कम गर्ने उनले थाहा पाए।
​​'मैले यसबारे धेरै अध्ययन गर्दा नेपालमा यस्तो ठाउँ नरहेको निचोडमा पुगेँ,' विभूषणले भने, 'केही डाक्टरहरूसँग परामर्श पनि गरेँ। यस्तो ठाउँले तनाव व्यवस्थापनसँगै मनोरञ्जन पनि दिने भएकाले नेपालमा भित्रिए राम्रो हुने थाहा पाएँ।'
विदेशतिर रिस-तनाव शान्त पार्ने उपायका रूपमा यस्तो चलन निकै छ। नेपालमा भने नयाँ अवधारणा सुरू गरेको उनी बताउँछन्। तोडफोडलाई उनी मनोरञ्जन दिने खेलका रूपमा पनि चिनाउन चाहन्छन्।
'यो अर्धचेतन मनमा कैद भएका रिस, तनाव पोख्न र मनोरञ्जन गर्न आउने ठाउँ हो,' विभूषण भन्छन्, ​​'यहाँ आएपछिको अनुभव बेग्लै हुन्छ।'
तोडफोडमा तोडफोड गर्न पाँच किसिमका प्याकेज छन्। तीन सय ५० देखि दुई हजार रूपैयाँसम्म शुल्क पर्ने प्याकेजहरूमा विभिन्न थरीका सामान फुटाउन पाउने व्यवस्था छ।
जस्तै 'नुब' प्याकेजमा चार वटा सामान फुटाउन पाइन्छ। यसमा दुई मिनेट समय दिइएको हुन्छ। यो प्याकेजको शुल्क तीन सय पचास रूपैयाँ हो। त्यस्तै टिभी र १२ वटा अन्य सामान फोड्ने हो भने एक हजार पाँच सय रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।
तोडफोड गर्ने कोठामा एकपटकमा दुई जनासम्म छिर्न पाइन्छ। दुई जना हुँदा प्याकेजमा केही सहुलियत मिल्छ।
'सामान फुटाउने औजारहरू भने फलामका रड र हतौडा हुन्,' गोदाम देखाउँदै विभूषणले भने, ​​'अहिले फुटाउनलाई खाली बोतल, टेलिभिजन, टायर र गिलासहरू छन्।'
तोडफोडको अनुभव लिन केही नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक गइसकेकालाई त थाहा हुन्छ, तर नयाँले यहाँ जानुअगाडि नै यी नियम थाहा पाउन जरूरी हुन्छ।
विभूषणका अनुसार यहाँ १८ वर्षभन्दा कम उमेरकाहरू जान पाउँदैनन्। त्यस्तै चप्पल लगाएर पनि छिर्न पाइँदैन।
​​'सबै मापदण्ड पूरा भएपछि बल्ल प्याकेजहरू छनोट गर्न दिइन्छ,' उनले भने।
चाहेको प्याकेज छानिसकेपछि मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। त्यसमा केही शर्तहरू उल्लेख हुन्छन्। अनि बल्ल रेज रूम छिर्न योग्य भइन्छ।
यसपछि अर्को कोठामा पिपिइ सेट, हेलमेट, वेल्डिङ पन्जा र जुत्तामा कभर लगाउन दिइन्छ।
सिसाका टुक्रा छरपस्ट हुनाले जोगिन र लुगा मैलो हुन नदिन यी सबै सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नैपर्छ। यति लगाएपछि बल्ल मुख्य कोठा छिर्न पाइन्छ।
यो सानो कोठाबाट बाहिर आवाज नआओस् भनेर 'साउन्ड प्रुफ' बनाइएको छ। यहाँ छिरेपछि तोडफोडका कर्मचारीले गर्न हुने र नहुने नियमबारे निर्देशन दिन्छन्। विभूषणका अनुसार तोडफोड क्रममा ग्राहकको रोजाइको गीत पनि बजाइन्छ। गीत बजाइदिएपछि तोडफोडका कर्मचारीले बाहिरबाट ढोका लगाइदिन्छन्।
गीत सुरू हुनासाथ समय सुरू हुन्छ। नियम विपरीत केही नहोस् भनेर तोडफोडका कर्मचारीले बाहिरबाट सिसिटिभी क्यामरामा हेरिरहेका हुन्छन्।
'कुनै उपद्रो वा नियम बाहिरको काम गरे कर्मचारीले तुरून्तै रोक लगाइदिन्छन्,' विभूषणले जानकारी दिँदै भने, 'अगाडि फुटाउने सामान र हातमा औजार हुन्छ। केही ग्राहक फुटाउने कि नफुटाउने भन्ने अन्यौलमा पनि पर्नुहुन्छ। तर जब एकपटक झरयाम्म सामान फुटाउनुहुन्छ वा हान्नुहुन्छ अनि त रोक्ने नामै लिनुहुन्न।'
तर तोकिएको समयमा त रोकिनै पर्‍यो। समय सकिएको संकेत चाहिँ गीत बन्द गरेर दिइन्छ। अझै तोडफोड गर्न मन भए शुल्क तिरेर समय थप्न सकिन्छ।
तत्काल तोडफोडका लागि सीमित सामान भए पनि विस्तारै‍ माइक्रोवेभ, ओभन र डमीहरू ल्याउने योजना उनले बनाएका छन्।
​​'डमी हामी जतिसक्दो छिटो ल्याउने तर्खरमा छौं,' उनले भने, ​​'रिस उठेको व्यक्तिको नाम वा पद डमीमा टाँसेर हान्न दिने योजना छ।'
तोडफोडमा प्रयोग हुने सामान काम नलाग्ने हुन्। उनीहरूले कवाड बिक्रेताबाट यी सामान ल्याइरहेका छन्। फुटेपछि टुक्राहरू फेरि उनीहरूलाई नै बेच्छन्।
विभूषणका अनुसार पुनः प्रयोगका लागि उनले भारतबाट मेसिन ल्याउने तयारी गरेका छन्। उक्त मेसिनले फुटेका सिसा धूलोमा परिणत गर्छ।
'अन्त्यमा त्यो धूलो पुनः निर्माणकार्यमा खर्चेर आम्दानी गर्ने योजना छ,' विभूषणले भने।
तोडफोड- द रेज रूममा अहिले पाँच जना कर्मचारी छन्। विभूषणका अनुसार कोठा साउन्ड प्रुफ बनाउनदेखि यहाँको सजावट र सामान खरिदमा करिब चार लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। खर्चेअनुसार ग्राहकको प्रतिक्रिया सन्तोषजनक रहेको उनी बताउँछन्।
हाल सानो ठाउँमा सञ्चालन हुँदै आएको तोडफोड फराकिलो बनाउँदै जाने र काठमाडौंमै तीन-चार वटा शाखा खोल्ने योजना पनि छ उनको।
उनी भन्छन्, 'पछि डाक्टरहरूसित सहकार्य गरी मनोरञ्जन मात्रै नभएर तनाव व्यवस्थापन केन्द्रकै रूपमा स्थापना गर्ने सोच छ।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ४, २०७८, ०७:२५:००